पर्यटन व्यवसायी लिम्बु प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार,राजनीतिमा सक्रिय भएपछि के भन्छन् उनी ? - Arthatantra.com
पर्यटन व्यवसायी लिम्बु प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार,राजनीतिमा सक्रिय भएपछि के भन्छन् उनी ?
काठमाडौ । आगामि मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका निम्ति पर्यटन व्यवसायी दल बहादुर (डिबी) लिम्बु उम्मेदवारी बनेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ ललितपुर जिल्ला क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवार बनेका लिम्बुसहित अन्य उम्मेदवारको नाम केही दिन अघि ललितपुरमा चुनावी प्रचारप्रसार कार्यक्रमबीच पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विगत तीन दशकदेखि पर्यटनमा आवद्ध लिम्बुले मुलुकमा सधैं राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्दै समग्र पर्यटनको विकासद्धारा मुलुकको आर्थिक विकास गराउन सकिने बताए । पर्यटनको माध्यमद्धारा मुलुकको विकास र शुद्ध आर्थिक एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएकाले जनताले अत्याधिक मतले बिजयी गराई एक पटक काम गर्ने अवसर दिने कुरामा आफू ढुक्क रहेको उनले बताए ।
को हुन् लिम्बु ? पढ्नुहोस्
भनिन्छ समय नै जीवन हो । समयले मानिसलाई जता लान्छ जीवन उतै जान्छ । दल बहादुर लिम्बुको जीवन पनि यस्तै भयो । ब्रिटीस आर्मीमा जागिर खाने उनको सोच थिएन तर १४ वर्षको उमेरमा जागिरे भए । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसाय अंगाल्ने उनको उदेश्य थिएन तर अहिले सफल पर्यटन व्यवसायीको रुपमा स्थापित पनि भए । त्यस्तै, राजनीतिमा लाग्ने पनि उनको उदेश्य कदापी होइन तर राजनीतिको अग्निपरीक्षामा होमिदै छन् । नजिकिँदै गरेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनी नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको तर्फबाट ललितपुर जिल्ला क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
वि.स. २०१८ श्रावणमा धरानमा बुबा रामलाल लिम्बु र आमा आइतोतीको कोखबाट जन्मेका लिम्बु ६ जना सन्तानमध्ये माइलो सन्तान हुन् । उनको बाल्यकाल मध्य वर्गीय परिवारमा बित्यो । स्थानिय बिद्यालय निकेतन मा.वि.बाट अक्षर शुभारम्भ गरेका लिम्बुले त्यहीँबाट २०३५ सालमा प्रवेशीका परीक्षा उत्रिर्ण गरे । त्यसपछि तत्काल उनी ब्रिटीस आर्मीमा जागिर खान हङकङ गए र त्यहाँ उनले १४ वर्ष बिताए । २०४९ सालमा ब्रिटीस आर्मीबाट अवकाश पाएका लिम्बुले केही समय हङकङको एक ट्राभल्स एजेन्सीमा काम गरे । उनी त्यहि हुँदा नेपालप्रति केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले उकुसमुकुस बनाएपछि २०५१ सालको अन्त्यतिर नेपाल फर्किए । २०५५ सालमा फास्ट ईन्टरनेशनल ट्राभल्स सञ्चालन गरे ।
निजी व्यवसायसँगै २०६१ सालदेखि निरन्तर समाजसेवामा लागेका लिम्बु ०६१ देखि नै ट्राभल्स क्षेत्रको छाता संगठन (नाट्टा) मा आबद्ध भए । सन् २००६ मा उनी नाट्टामा सचिव बने र २००८ मा महासचिव हुँदै
२०१४–०१६ सम्म अध्यक्ष भए ।
फास्ट ईन्टरनेशनल ट्राभल्स एण्ड टुर्स र फास्ट ट्राभल्स सोलुसन प्रा.लिको सञ्चालक तथा मेगा बैंक र टुरिजम विकास बैंकको प्रमोटर छन् । समग्र मुलुकको परिवर्तन राजनीतिले मात्र सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका लिम्बु व्यवसायसँगै पारदर्शी राजनीतिमा पनि सक्रिय भएर लाग्ने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले आफूलाई अपेक्षितभन्दा बढी मत दिएर बिजयी गराउनेमा आफू ढुक्क रहेको उनको दाबी रहेको छ ।